Mmekọrịta Ọhụrụ na Vimeo nke Ngwakọta Ngwakọta Ya Guzosie Ike Dị Ka forkpụrụ Maka Ndị Na-ese foto | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 26, 2017 Fraịde, Septemba 29, 2017 Douglas Karr
Otu n'ime ụlọ ọrụ agbata obi anyị na ụlọ ụlọ anyị na-arụ bụ ụfọdụ ndị na-ese ihe nkiri, Zụọ 918. Ha nwere ọpụrụiche n'iweta akụrụngwa ha ebe ọ bụla n'ụwa ma na-emepụta vidiyo epic. Ọ bụghị naanị na ụdị ọrụ ha na-arụ dị ịtụnanya. Ha na-etinye oge dị ukwuu n’oge ha na-emepe akụkọ, na-atụgharị ya na mpaghara, ma na-eme atụmatụ ha ugbu a impeccpe. Nsonaazụ a na-emetụta mer ebe a bụ ụfọdụ ihe atụ site na ụlọ ọrụ ha:
M zutere otu n'ime ndị guzobere ya ma na-agwa ya okwu banyere ụdị ngwaọrụ ha na-eji iji mee ka ndị mmekọ na-emekọrịta ma ọ bụ ndị ahịa nyochaa ọrụ ha. Joshua mere ka anyị mata nke ahụ Vimeo na nso nso a gbasawanyere ngwa ọrụ ha, na-enye ha ihe niile ha chọrọ. Nke mbu bu peeji ndi nlere vidiyo nke na enyere ndi nlebanye anya itinye akara aka n’edemede na ndetu wee kparita uka na ya. Nke abụọ bụ nnabata na Adobe Premiere Pro nke na-enyere ebugo vidiyo na Vimeo.
Peeji nke Video Vimeo
Nyocha na Mmekọrịta ndetu - Ndị na - enyocha ya nwere ike pịa ozugbo na etiti ọ bụla ịhapụ ederede ederede oge. Mgbe ịpịrị ihe edeturu, ị ga-awụfe aka nri ozugbo.
Soro ndị na-enyocha oke - Na nzuzo ziga njikọ nyocha nke onwe gị na nzuzo na onye ọ bụla - ọbụlagodi na ha anọghị na Vimeo.
Soro ọganihu gị - Zaghachi na ozugbo, ma ọ bụ gbanwee ndetu n'ime ndetu ime ihe iji mee ka imelite vidiyo gị dị mfe karịa ka ọ dị na mbụ.
Oghere Vimeo maka Adobe Premiere Pro
The Vimeo Ogwe maka Adobe Premiere Pro na-enye ohere video technicians ka mfe ha edezi workflow site n'inye a ụzọ mfe bulite ha video kpọmkwem site software. Vimeo PRO ma ọ bụ ndị otu azụmahịa nwere ike ịmepụta peeji nyocha site na ngalaba na-enweghị ego. Atụmatụ gụnyere:
Bugote vidiyo ozugbo - Zipu vidiyo gị ozugbo na gị Vimeo Akaụntụ, họrọ ntọala nzuzo gị ka ị na-ebugo, mbubata ntọala nzuzo nke gị, na ndị ọzọ.
Zọpụta Oge Mmepụta - Lekwasị anya na ọrụ gị ma mee ka arụmọrụ gị dị mfe site na ibugo vidiyo na imepụta ibe nyocha na-ahapụghị Premiere Pro.
Budata Vimeo Panel maka Adobe Premiere Pro
Ngosipụta: Martech bụ ihe Onye ikike Adobe Mgbakwunye na Vimeo Mgbakwunye. Anyị na-eji njikọ njikọta anyị na edemede a.
Tags: adobeadobe premiere proVidio Ahịapremiere provideo mmekotanyochaa vidiyoVimeopeeji nke vimeo
Feb 27, 2017 na 4:28 PM
Hey Doug, agbalịrị m ịkekọrịta ozi a na otu onye na-emepụta ihe nkiri na Facebook, mana ọ na-amalite dị ka vidiyo. Kasị njọ, ọ gaghị egwu egwu mgbe ịpịrị ya. Isiokwu n'onwe ya agaghị ejikọ ma ọ bụ gosipụta.
Feb 27, 2017 na 6:42 PM
Facebook anaghị egwu onye ọ bụla!